चौथो खेलमा सन्दीप चल्न सकेनन ! सन्दिप महँगो साबित हुँदा केराला नाइट्स पराजित ! - Kendra Khabar
चौथो खेलमा सन्दीप चल्न सकेनन ! सन्दिप महँगो साबित हुँदा केराला नाइट्स पराजित !
२०७५, ११ मंसिर मंगलवार ०६:२१
यूएईमा जारी टी–१० लिगमा नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित केराला नाइट्स चौथो खेलमा पन्जाब लेजेन्ड्ससँग ३६ रनले पराजित भएको छ ‌। पछिल्लो तीन खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरेका नेपाली यूवा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले चौथो खेलमा भने विकेट लिन सकेनन् ।
पञ्जावी लिजेन्ड्सविरुद्ध खेलमा आफ्नो दुइ ओभर गर्दै सन्दीपले २८ रन खर्चे । दोस्रो ओभरमा सन्दीपले उमर अकमललाई बलिङ्ग गरेका थिए । उनको पहिलो बलमा छक्का प्रहार गरेका अकमलले त्यसै ओभरमा तीन चौका पनि प्रहार गरे ।
छैटौं ओभरमा व्यक्तिगत दोस्रो ओभर गरेका सन्दीपले दुइ चौकाको सामना गरे । पहिलो खेलमा तीन, दोस्रोमा एक तथा पछिल्लो खेलमा दुई विकेट लिएका सन्दीपले पन्जाबसँग भने विकेट लिन सकेनन् ।
सन्दीपको टोली करेला नाइट्सले टस जितेर बलिङ्ग गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्धारित १० ओभरमा पन्जाबले ५ विकेट गुमाउँदै १ सय ७ रन बनायो । पन्जाबका लागि अकमलले सर्वाधिक ३० रन जोडे ।
जवाफमा केरालाको लागि अोपनर क्रिस गेल बाहेक अन्य कुनै ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन् । केरालाले नवौं अोभरमा अलअाउट हुनुअघि ७१ रन मात्र बनाउन सक्यो । गेलले १९ बलमा ३५ रनको योगदान दिए । सन्दीप १ रनमा नटअाउट रहे । पन्जाबका लागि म्यान अफ दि म्याच हसन खानले ४ तथा प्रविण कुमारले ३ विकेट लिए ।